संघीय संसदका ४१ सांसदलाई ६८ लाख उपचार खर्च !::Online News Portal from State No. 4
संघीय संसदका ४१ सांसदलाई ६८ लाख उपचार खर्च !
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७३ अनुसार सो रकम लगेका हुन्।
बागलुङ, १६ मंसिर – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ४१ सांसदले छ महिनामा स्वास्थ्योपचार बापत ६८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जेठदेखि कात्तिकसम्मको छ महिनामा ६८ लाख ४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७३ अनुसार सांसदहरूलाई चिकित्सा बोर्डको सिफारिसअनुसार सो रकम लगेका हुन्। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदलाई उपलब्ध गराइएको औषधि उपचारबापतको रकम बिलभर्पाइ अध्ययन गरेर उपलब्ध गराइएको बताए। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतको ६ सय १ सदस्यीय संसदको तुलनामा औषधि उपचारबापत रकम लिन आउने सांसदको संख्या न्यून रहेको छ।
एकजना सांसदले २० लाख रुपैयाँसम्म रकम माग गरे पनि सचिवालयले नदिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पहिला सांसदले ल्याएका औषधि उपचारका बिलभपाइ अस्वीकृत गरेर पनि धेरै नै फिर्ता पठाइयो तर अहिले भने धेरै बिलभपाई अस्वीकृत गर्नुपरेको छैन।’